Teregiramu yatotibvumidza kudzima mameseji akatumirwa | IPhone nhau
Iyo mameseji chikuva iyo iri kuramba ichizivikanwa pakati pevashandisi, Teregiramu, inoramba ichingova nzvimbo yekuberekesa uko WhatsApp, iri mumaoko eFacebook, inowanzo kufemerwa asi isingasviki pane yakajairwa, nekuti iyo kopi uye yekunamatira michina yakatsaurirwa chete kune iyo Facebook application. Vazhinji vashandisi vari kutora Teregiramu seimwe yevanofarira mameseji ekunyorera nekuda kwekugona kwekugovana maGIF, kugovana chero mhando yerugwaro, kuwiriranisa pakati pemidziyo yese iyo iko kunosungirwa application (inova multiplatform) ... Kana usati waedza izvozvi, vakomana veTeregiramu vanotipa chimwezve chikonzero kuita kudaro: kugona kudzima mameseji anotumirwa zvese mumapoka uye kune vanhu.
Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe wakakwenya kunyora chimwe chinhu chausina kuyera, kana iwe wakaita chisina musoro chiperengo chikanganiso, kana iwe unongoona iwe yako yekutaura iri nyore. Muzviitiko izvi kutaura kwakanyanya kunowanzoitika pasi kundimedza. Asi neTeregiramu yekuvandudza nhamba 3.16, tinogona kudzima mameseji anotumirwa vega kana mumapoka, vabvise kuitira kuti vanyangarika kubva pakuona kwevashandisi vese kana chete kune edu maonero. Ehezve, iyo nguva inowanikwa kuzviita maawa makumi mana nemasere.
Mwedzi mishoma yapfuura, iko kunyorera kwakatibvumidza kunakidzwa nemavhidhiyo eYouTube tichishandisa iyo Mufananidzo-mu-Mufananidzo basa, basa iro rinowanikwawo kumavhidhiyo anoratidzwa pane mamwe mapeji, kwete paYouTube chete. Uye zvakare, tinogona zvakare kuwana rumwe ruzivo nezve mashandisiro eedu data rate kana Wifi kubatanidza yatinoita pamwe nekushandisa, kutarisa nguva dzese kuti iyo Teregiramu traffic yave iri uye kana tichifanira kutanga kufunga nezvekugadzirisa marongero kuitira kuti hazviiti zvese zvemukati zvakatumirwa kwatiri zvinongo dhawunirodwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Teregiramu yatotibvumidza kudzima meseji dzakatumirwa
Deibris Aguilera akadaro
Ndekupi kwandinogona kuverenga zvakawanda nezveTeregiramu?
Pindura kuna Deibris Aguilera
Mutsananguro yekushandisa kana pawebhusaiti https://telegram.org